Indawo Enhle - I-East Middlebury River House - I-Airbnb
Indawo Enhle - I-East Middlebury River House
181 okushiwo abanye
Middlebury, Vermont, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Abbott
U-Abbott Ungumbungazi ovelele
Leli fulethi elisanda kulungiswa, elibanzi elingasemfuleni licebile ngezinto eziwusizo. Ukuphunyuka okumangalisayo kwezithandani, futhi kunendawo eyanele yokubaleka abahambi abaningi. Itholakala kalula eDowntown Middlebury, Middlebury College, Snow Bowl Ski Area, Rikert Nordic Skiing kanye ne-Waybury Inn yodumo kanye ne-Middlebury Swimming Hole. Le ndawo eseceleni komfula izidla ngokunethezeka kwehhotela elinendawo eyengeziwe kanye nokunethezeka kohambo olulula.
Ifulethi linendawo yokupaka enamathiselwe, embozwe izimoto ezimbili. Umpheme ongemuva ubonisa ukubukwa komfula iMiddlebury. Izingadi ziyakhanya ehlobo futhi kuba khona ukususwa kweqhwa njalo ezinyangeni zasebusika. Ikhishi elihlome kahle lixhunywe netafula lokudlela elikhulu labantu abangu-8. Wonke amagumbi okulala afaka omatilasi be-latex abasekelayo noma be-memory foam kanye nama-closets avulekile. Afakwe amashidi kakotini wokubala intambo angama-500 kanye nama-comforters aphansi. Igumbi lokuhlala linomabonakude omkhulu ongu-50" kanye nezindawo ezimbili zokuhlala.
4.98 out of 5 stars from 181 reviews
4.98 · 181 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-181
Ikhaya litholakala kalula eDowntown Middlebury, izindawo zokushushuluza kanye naseMiddlebury College. Kuwukuphila kwasemadolobheni, nokho kuseduze nemvelo. Ibhuloho elingemuva kwendlu lixhunywe emizileni yemvelo. Izinkundla zethenisi kanye nenkundla yokudlala zingaphesheya komgwaqo.
I enjoy the City of Burlington and all it has to offer, such as yoga, restaurants, lake front parks and bike paths, farmers' markets and food truck rallies - in addition to hiking and skiing. Love to travel. Most recent trip was to Duns Castle, outside of Edinburgh, Scotland, but I also travel somewhat often for work. In down time, I can usually be found using computer, smart phone or reading voraciously on the Kindle.
I enjoy the City of Burlington and all it has to offer, such as yoga, restaurants, lake front parks and bike paths, farmers' markets and food truck rallies - in addition to hiking…
Njengoba ngizihlinzeka ngokuzihlola, cishe ngeke sikwazi ukubonana mathupha, kodwa ngokuvamile ngitholakala ngokushesha ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb cishe nganoma yisiphi isikhathi emini nasebusuku. Jabulela ukusiza nganoma yimiphi imibuzo noma izincomo!
Njengoba ngizihlinzeka ngokuzihlola, cishe ngeke sikwazi ukubonana mathupha, kodwa ngokuvamile ngitholakala ngokushesha ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb cishe nganoma yisiphi isikha…
UAbbott Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: MRT-10126712